Zafilahy Stanislas : « Misoloky i Riana Andriamandavy” – MyDago.com aime Madagascar
Zafilahy Stanislas : « Misoloky i Riana Andriamandavy”
Manohy ny politika malotony. «Voafitaky ny minisitra teo aloha Andriamandavy Riana ianareo ao amin’ny Hery vaovao ho an’i Madagasikara. Mbola mitonona ho filohan’ny tanora Tim izy io, nefa efa tsy filoha intsony sady foana izany tanora Tim izany. Tetika maloto noho ny re
saka tombontsoa no ataon’izy ireo amin’ny famitahana ny Zanak’i Dada any amin’ny faritra rehetra any», hoy ny lahatenin’ny CT, Zafilahy Stanislas tao amin’ny Kianjan’ny Magro, Behoririka, tamin’ity herinandro ity. Notsiahiviny fa efa nandadilady tany amin’i Neny teny Faravohitra izy ireo, raha mbola kandidà Ravalomanana Lalao tamin’izany fotoana izany.
Manoloana ireo rehetra ireo, nampitandrina ity mpiara-dia amin’i Dada ity fa misoloky Andriamandavy Riana. «Mitady ny fomba hisintonana ireo tanorantsika izy ireo. Ireo marivosalosana no ho azony amin’ izany… Ento amin’ny anaranao any ny tianao atao fa aza fitahina amin’ny anaran’i Dada sy ny anaranay ny olona», hoy izy. Hitombina ve fa afaka hampody an’i Dada eto io kandidà tohanan-dRiana Andriamandavy io, araka ny nambarany. “Ataony hirahira sy handresena lahatra ny olona izany”, hoy ihany ny CT Zafilahy.
Voka-pifidianana efa vita mialoha
Nohitsiny koa fa misy kandidà roa naka vola tao amin’ny Tahirim-bolam-panjakana ary manao fafikatrana ny volam-bahoaka. Tsy vitan’izany. «Eo koa ny efa fanomanana hosoka mahatsiravina amin’io fifidianana io. Toy ny efa fisian’ny voka-pifidianana efa vita mialoha…», hoy ihany izy.
Antony, tokony hanemorana ny fifidianana izany, araka ny fanamafisany ka tokony hijerena ny fampihavanam-pirenena aloha.
Nahazo ny anjarany avy amin’ny mpomba an-dRavalo izany ireo nisintaka sy ireo kandidà sasany ?
Auteur Solo Razafy*Publié le 12 septembre 2013 12 septembre 2013 Catégories Politique
6 réflexions sur « Zafilahy Stanislas : « Misoloky i Riana Andriamandavy” »
12 septembre 2013 à 14 h 17 min
Mahagaga ve ?
Misy fankasitrahana ao matoa izy sahy manao izao HAGEGENA izao Zafilahy a!!
raha ny momba ny fifidianana indray dia ALEO HANDEHA HO TAZAMINA.
Tsy vao2 ny fangalana PASIPAORO ny anarana’i DADA fa ny MPITARIKA ANIE MIARA-MIOSONA @’IREO e!!!
MISY TSIKOMBAKOMBA RATSY AO ARY TETIKA EFA MATIPAIKA IZAO e!!!
IZA NO MBOLA NANKASITRAKA An’ILAY io ANEFA HONO , ilay nanerena ity ankolafy rehetra fa » ho raisina ireo
nisintaka » ????TSY MBOLA I KOTOVELO ve???koa raha mbola i KOTOVELO NO MPITARIKA EO DIA AZA MISY
GAGA FA MBOLA HO AVY NY » MANARAKA KOA « .
Ireo angaha hisy haninona fa tsy avela hanao ny hataony ???
Tena mba nanaitra ny maro iny fanambarana miezinezina nataon’ingahy Ratsiraka mikasika ny fifidianana tamin’ny 2006 iny an! Efa fantatra mialoha ny fifidianana hoy izy fa 54,4% no azon-dRavalomanana Marc. Tena mba nilaza ny marina ingahy Ratsiraka tamin’iny resaka iray iny! Mpangalatra amin’ny lafiny rehetra manko ingahy Ravalomanana Marc: vola, tanim-bahoaka, tranon’olona… Malaza amin’ny fangalaram-pahefana koa izy. Fa ny fangalaram-bato amin’ny fifidianana no tena talentany. Soa fa tsy afaka nilatsaka ramatoa vadiny!
Dia hita mihitsy fa tsy ampy devise
Faly foana manaratsy any Ravalomanana
Na hiodina avia na hiodina havanana
Dia tsy hanana mihitsy fa eo foana tsy mba misy namana
Misolelaka ery ny aminy teniny Ratsiraka
Nefa tsy misy saina mainvandaho mitovy aminy firaka
14 septembre 2013 à 1 h 50 min
mampalahelo leitsy le fisainan la ry riana. mbol tanora nef mialalao afo. rehefa miarak amy FOZA ORANA DIA FOZA ORANA
Précédent Article précédent : RAVELOSON CONSTANT : TOLONA AFON’ AMPOMBO NY ANTSIKA
Suivant Article suivant : RAKOTOARIVONY JEAN PIERRE : NY ZANAK’I DADA DIA MANARAKA NY FITSIPI-PIFEHEZANA